10 Inoshamisa Inomira MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > 10 Inoshamisa Inomira MuEurope
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Switzerland, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Maonero akanaka, misha isinganzwisisike, nhare dzakavharirwa, uye dzimba dzisina kujairika, izvi 10 zvinoshamisa kumira muEurope zvingada kurebesa kugara kwako, asi vakakodzera chose kushanyirwa.
1. Zvinoshamisa zvinomira MuEurope: Rakotzbrucke, Jerimani
Yakavigwa kure mupaki diki muSaxony, Dhiyabhorosi Bridge, inozivikanwawo seRakotzbrucke, yakakodzera zvachose rwendo rwakaoma kubva kuBerlin. The spiral rocky zambuko kubva 1860, chiono chinonakidza uye chinonakidza vafambi nekuda kwechimiro chayo chakasiyana uye magadzirirwo. Shiri dzakapinza padivi rega rega uye bhiriji rinotenderera, tarisa kuti vaigona kunge vakaitwa nadhiabhorosi pachake, asi chaizvoizvo zvose zvakaitwa nevanhu.
Uyezve, nyaya dzinoti varume vanovaka zambuko iri sechipiriso kuna satani kareko, asi nhasi ingori nzvimbo yemashiripiti. Hapana zvakawanda zvekuita pedyo, saka zviri nani kusanganisa kushanya kuRakotzbrucke nerwendo kuenda kuKromlau park.
2. Champagne-Ardenne, Furanzi
Mipata ine miti yakasvibira uye nzvimbo isingagumi yeminda yemizambiringa newaini chena. saka, kushanyira Champagne-Ardenne kunogona kuve kunoshamisa kumira parwendo rwako kuenda kuItari nzvimbo yewaini, Tuscany. Nyika yechampagne iri pakati peParis neLorraine. saka, kumira pane imwe ye minda mikuru yemizambiringa muChampagne-Ardenne inogona kuva yekuwedzera inotyisa kune a vasikana’ rwendo kuna Paris.
Mukuwedzera, iri imba yeumbozha inopenya champagne, nharaunda iyi ine nhoroondo yakakura kukosha. Semuyenzaniso, anoshamisa Joan weArc akabva kumusha weDomremy. saka, ungangonzwa nyaya dzinoshamisa uchiravira waini mumunda wemizambiringa weFrance unoyevedza. Pazasi mutsara, Champagne-Ardenne ndeimwe yeaya 5 zvinoshamisa zvinomira muFrance.
3. Zvinoshamisa zvinomira MuEurope: Oberhofen Castle, Siwizarendi
Pamhenderekedzo yegungwa dziva rakanaka elastic, Oberhofen castle ndiyo imwe yenzvimbo dzakanakisa muSwitzerland. Oberhofen Castle iri pakati peBern, Interlaken, uye Lake Lucerne. saka, kushanya kuOberhofen castle uye Lake Thun inzvimbo inoshamisa yekumira munzira refu yakanaka.
Pamusoro pe, iyo castle-turned museum inotangira muzana ramakore rechi 13 ine bindu rinoshamisa kwaunogona kuyemura miti yakawanda yekunze., maruva, uye maonero eAlps. saka, unogona kushandura rwendo rwehafu yezuva kuita rwendo rwezuva rose kuenda kuOberhofen, uye paki yakanaka iri padyo kuti unzwe kunyarara kwakanyarara uye maonero akanaka, apo mapoka evanhu achimhanyira kuLucerne.
Interlaken kuZurich Ine Chitima
Lucerne kuenda kuZurich Ine Chitima
Bern kuZurich Ine Chitima
Geneva kuZurich Ine Chitima
4. Vorarlberg, Ositiriya
Yakatarisana neLake Constance yakanaka, Vorarlberg ine mukurumbira neiyo epic dziva uye maonero emakomo. Guta reAustria riri mujinga meVorarlberg, zvakanakisa kuchengetedza nzvimbo yemakomo makuru, uye nzira dzakasvibira. Kunyangwe iwe uri kufamba kubva kuLiechtenstein kuenda kuAustria kana Germany, Vorarlberg inoshamisa kumira parwendo rwako rwechitima kuEurope.
Mountain breakfast, kana kupera kwevhiki kwakanyarara mune zvakasikwa pamberi peguta rakabatikana, iwe unofanirwa kuita nguva yeVorarlberg. Iri guta harina kunyanya kuzivikanwa pakati pevafambi, zvisinei, Vorarlberg ndiko kwaunogona kuona tsika dzeAustria uye chikafu. Uyezve, iwe uchave wakakomberedzwa neanofema kwazvo eAustria nzvimbo, misha, uye maonero anoyevedza – iyo yakanyanya kunaka Austria inofanirwa kupa, kure nenzvimbo dzevashanyi.
5. Zvinoshamisa zvinomira MuEurope: Freudenberg, Jerimani
Itaundi rinonakidza rekare reFreudenberg nderimwe remaGermany, uye maguta eEurope anoyevedza zvikuru. Chikuru chinokwezva apa ndechekuti 80 kana kuti dzimba chena dzakagadzirwa nemapuranga, kutarisa kunyanya kunaka muchando. saka, rwendo kuenda kuchando-yakafukidzwa Freudenberg is an chisingakanganwiki ruzivo, iyo inokudzosera shure munguva uye kunyika dzengano.
Uyezve, Freudenberg iri pakati pezvikomo zvakasvibira, ne 160 km zve Hiking mudungwe munzira uye maonero makuru. Nzvimbo yeWestphalia yakanaka munguva yechirimo apo zvinhu zvose zvakasvibira uye zvichitumbuka. The 6 maawa echitima rwendo kubva kuBerlin kwakakodzera zvachose, for a glimpse of one of the most maguta ekare anoyevedza muGermany.
Maonero epamusoro 40,000 hexagonal basalt mbiru dzinodzika mugungwa rebhuruu muGiant's Causeway dzinoyevedza. Izvo zvinoshamisa zvechisikigo zvinodarika makore 6o miriyoni, inogona kuwanikwa kuburikidza negirini, tsvuku, uye nzira dzebhuruu. Nokuda kwechimiro chavo chakasiyana, makoramu aya anoisa Giant's Causeway kurudyi ne 7 zvimwe zvishamiso zvenyika.
saka, hazvina basa kutaura, iyo Giant's Causeway ndeimwe ye 10 zvinonyanya kushamisa kumira kuita muIreland. Kunyangwe iwe uri kufamba kubva kuBelfast kana Dublin, kuwana nguva yekuita izvi rwendo rwezuva runoshamisa muNorthern Ireland. Yakakomberedzwa neruvara rwakasvibira rweIrish landscapes, negungwa rebhuruu patsoka dzayo, nhanho yega yega padivi pemakoramu aya anoputika achakuswededza parwendo rwako kuti uwane akanakisa uye anoshamisa kwazvo pasi..
7. Zvinoshamisa zvinomira MuEurope: Zermatt, Siwizarendi
MaAlps makuru akakura zvekuti chero nzvimbo yaunosarudza kumira pairi inobvisa mweya wako. zvisinei, hapana chakafanana nemaonero anoshamisa e Swiss Alps muZermatt. Nepo Zermatt yakakurumbira kune yayo inotyisa skiing materu, inotaridzika zvakanaka muchirimo uye muzhizha.
Zermatt imba kune imwe ye makomo anoyevedza zvikuru muEurope, Matterhorn. Kunyange zvazvo inoratidzika sehukuru uye kure nekusvika, Runako rweZermatt rwendo rwechitima kubva kuBasel, Bern, uye Geneva. saka, iwe unogona kuuya kwekupera kwevhiki kana kuwedzera nguva yako pfupi kuzororo risingakanganwike muSwitzerland Alps.
Iwe unozotorwa moyo neasina kujairika Trulli, munzvimbo inoshamisa yeSalento. Dzimba dzeConical dzine ma facade machena uye matenga akashongedzwa anodzokera kuzera reBronze. Zvivako izvi zvakasiyana-siyana zvaifanira kuva zvenguva pfupi, asi vazhinji vakapukunyuka nguva nemamiriro okunze, muguta rakanaka reAlberobello. Alberobello nderimwe remataundi anoyevedza muSouthern Italy, uye kumira kukuru pamhenderekedzo yeItaly.
Nepo guta iri idiki, unogona kufamba nyore kuenda kuAlberobello uye Trulli zone nezvitima zvematunhu. Nenzira iyi, iwe unogona kuita mamwe mashoma ekumira mune mamwe maguta anoyevedza, saLecce wekare, seaside bari, uye Trani. Pamusoro pe, aya maguta akanaka zvishoma nzira-yakarohwa-nzira muItaly uye pasina ruzhinji rwevashanyi.
9. Zvinoshamisa zvinomira MuEurope: Beaulieu-Sur-Mer Village France
Pakati peMonaco neNice, muFrench Riviera inoshamisa, Beaulieu-sur-Mer inzvimbo inonakidza yekumira padivi pegungwa uye kusvetuka kuti unyure inozorodza muGungwa reMediterranean.. Mahombekombe ega ega, dzimba dzeumbozha, uye maonero makuru eSaint-Jean-Cap-Ferrat peninsula, haina kurota kupfuura iyi muEurope.
Pamusoro peBeaulieu-sur-Mer, kune akawanda anofema anomira pedyo neLes Corniches, migwagwa yemawere inotevedza French Riviera. Iyo 30-km drive inotanga muNice uye inopera muMenton, mumwe we nzvimbo dzine mavara akawanda muEurope. Kunyange zvazvo iri 30-km chete, varipo zvishoma 10 zvinoshamisa zvinomira mumugwagwa uyu unoyevedza muEurope.
Nyika yedzimba dzemapurazi akafurirwa nouswa uye 170 zvitsuwa, Giethoorn is a musha unoshamisa muNetherlands. Uyezve, vachitevedza migero, pasi pemabhiriji emapuranga, rakapoteredzwa nenyika dzakasvibira nemaruva, chiitiko chausingafi wakakanganwa.
Iyo inoyevedza diki musha weGiehoorn mu national Park Weerribben-Wieden inoshamisa kumira parwendo mhiri kweHolland. Nepo musha mudiki uyu wakaoma nechando muzana remakore rechi18, kutenda zvemazuva ano zvifambiso, iwe unogona ikozvino kusvika kuGiehoorn kubva kuAmsterdam mune isingasviki 2 maawa.
Isu tiri Save A Train uchafara kukubatsira kuronga rwendo kune idzi 10 zvinoshamisa kumira muEurope.
Iwe unoda kumisa yedu blog post "10 Inoshamisa Inomira MuEurope" pane yako saiti? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fsn%2Famazing-stops-europe%2F - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
AmazingStops amazingstopseurope Kumira StopsInEurope parwendo